Apple waxaa laga yaabaa inay soo saarto kormeeraha kala badh qiimaha Pro Display XDR | waxaan ka imid mac
Haddii isticmaale Apple uu qorsheynayo inuu iibsado Mac mini, waxay sidoo kale u baahan yihiin a Kormeerka. Oo haddii waxa aad iibsanayso uu yahay MacBook, waxay aad ugu badan tahay inaad sidoo kale u baahan tahay shaashad dibadda ah oo weyn si aad ula shaqeyso laptop-ka miiskaaga.
Markaa waxa ugu horreeya ee uu sameeyo, maadaama uu yahay taageere wanaagsan oo astaantan ah, waa inuu eego dukaanka Apple Store kaas oo kormeerayaasha laga iibsan karo ku habboon Mac-kiisa cusub. Kaliya laba nooc oo kormeerayaal dibadda ah ayaa diyaar ah. Hal kharash 5.499 Euros iyo mid la mid ah laakiin leh 6.499 Euros nanotextured galaas oo garabka ah. Laakin tani wax yar ayey isbedeshaa.
Apple hadda waxay "ku qasbaan" isticmaaleyaasha Mac mini iyo MacBook inay la shaqeeyaan qolo saddexaad oo aan ahayn kormeerayaasha Apple. Si fudud sababtoo ah waxa kaliya ee uu leeyahay hal model bandhigay dibadda, ah Pro Display XDR oo leh qiimo mamnuuc ah inta badan dhimashada: 5.499 Euros iyo 1.000 Euros ka badan haddii aad rabto inaad ku dhejiso galaas matte ah oo aan milicsi lahayn. Mid firfircoon.
Laakiin Mark Gurman, ayaa soo dhejiyay Bloomberg, in Apple uu qorsheynayo inuu bilaabo kormeeraha dibadda cusub kaas oo ku kici doona ilaa 2.500 Euros. Inkasta oo ay sii wadi doonto inay qaali noqoto marka loo eego bixinta kormeerayaasha tayada leh ee aad ka heli karto suuqa, ugu yaraan, waxaad yeelan doontaa ikhtiyaarka ah inaad doorato shaashadda Apple oo kala bar qiimaha Pro Display XDR ee hadda jira.
Xogtan ayaa ku habboon xantii uu tuuray barta Twitter-ka @dylandkt,markii uu taas sharaxay LG bandhigay Waxa uu u naqshadaynayey saddex shaashadood oo cusub Apple, 24, 27 iyo 32 inches. Malaha, labada hore waxay noqon doonaan Apple Silicon iMac, iyo 32-inch mid ka mid ah kormeeraha dibadda cusub.
Waxaan rajeyneynaa in waxaas oo dhami ay run yihiin, dhawaana waxaan fursad u heli doonnaa inaan Apple ka soo iibsanno kormeeraha dibadda qiimo ka jaban kan hadda jira ee Pro Display XDR.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple waxay qorsheyneysaa inay soo saarto kormeere cusub kala bar qiimaha Pro Display XDR